ပြည်တွင်းပုံနှိပ်လုပ်ငန်း ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့် စက္ကူများအပေါ် မှီခိုနေရ
ပုံနှိပ်နှင့် စာအုပ်လုပ်ငန်းများ၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည် ပြည်ပမှတင်သွင်းသည့် နိုင်ငံခြား စက္ကူများအပေါ် အများဆုံး မှီခိုနေရကြောင်း သိရသည်။ ပြည်တွင်း၌ ငွေကြေးအရင်းအနှီးနှင့် နည်းပညာ အားနည်းမှုကြောင့် အဆင့်မြင့် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းသုံး စက္ကူချောများကို ဈေးကွက်လိုအပ်ချက် ပြည့်မီအောင် ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း မရှိသဖြင့် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းသုံး အရည်အသွေးမီ စက္ကူအများဆုံးကို ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ဝယ်ယူတင်သွင်း နေရသည်။ လုပ်ငန်းရှင်များသည် အင်ဒိုနီးရှား၊ တောင်ကိုရီးယား၊ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှ စက္ကူများကို ပုံမှန်ကုန်သွယ် လမ်းကြောင်းမှ တင်သွင်းသကဲ့သို့ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းမှလည်း တင်သွင်းသည်။ အရည်အသွေးအားဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားမှ တင်သွင်းသည့် စက္ကူများသည် ပြည်တွင်းဈေးကွက်၌ လူကြိုက်အများဆုံး ဖြစ်ကြောင်း၊ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းရှင်အများစုမှာ ကိုယ်တိုင်တင်သွင်းသည်ထက် သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ တစ်ဆင့် ဝယ်ယူကြကြောင်း သိရသည်။ ယင်းသို့ နိုင်ငံခြားမှ တင်သွင်းရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်များသည် မိမိတို့ ထုတ်လုပ်သည့် ဈေးကွက်နှင့် အခြေအနေအရ စက္ကူသစ်များကို တင်သွင်းခြင်းရှိသကဲ့သို့ တစ်ခါသုံးပြန်လည် သန့်စင်သည့် စက္ကူများကိုလည်း တင်သွင်းသည်။ ရန်ကုန် စက်မှုဇုန်များတွင် တစ်ပတ်ရစ် သန့်စင်သည့် စက္ကူထုတ်စက်ရုံ အရေအတွက်မှာ ၁၀ ဂဏန်း အောက်သာရှိသဖြင့် ဈေးကွက် လိုအပ်ချက်ကို မဖြည့်ဆည်း နိုင်သေးကြောင်းမြန်မာတိုင်း(မ်) ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, July 31, 2010 Links to this post
ပြည်သူ့အနုပညာရှင် ကိုကျော်သူ၏ မြန်မာပြည်သူများအား ပေးဆပ်မှု
တစ်ချက်ခုတ် သုံးချက်ပြတ် ကုသိုလ်
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူနှင့် ဦးသန်းစိန်တို့အဖွဲ့သည် ပြည်မြို့ ရွှေပေါက်ပင်ဆရာတော်ကြီးအား ၀ါတွင်းဆွမ်းကပ်ရန် ၂၈.၇.၂၀၁၀ (ဗုဒ္ဓဟူး) နေ့တွင် ပြည်မြို့သို့ သွားခဲ့ရာ နေ့လည် (၂း၀၀) နာရီခန့်တွင် ပြည်မြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ပြည်မြို့ ရွှေပေါက်ပင် ကျောင်းသို့ ရောက်ရောက်ခြင်း ဆရာတော်ကြီးအား ဦးတိုက်ကာ ရွှေပေါက်ပင် ကျောင်းဝင်းအတွင်းရှိ အများပြည်သူ လှူဒါန်းထားသော အများပြည်သူအတွက် အုတ်ရေကန်နှင့် အ၀ီစိရေတွင်း အခြေအနေ ကို ကြည့်ရှုကြပြီး ၃၀.၇.၂၀၁၀ (သောကြာ) နေ့ နံနက်တွင် ရွှေပေါက်ပင်ဆရာတော်ကြီးအား ဆွမ်းလောင်းလှူမည့် အစီအစဉ်ကို ဆရာတော်ကြီး၏ တပည့်များနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြသည်။
နေ့လည် (၃း၀၀) နာရီခန့်တွင် ပြည်မြို့ ပရဟိတလူငယ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ကိုညီညီအောင်၊ ကိုမိုးကြီး တို့အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံကြစဉ် အောင်လံမြို့နယ် မကွေးတိုင်း ငပျင်းကျေးရွာရှိ ကိုထွန်းမင်းနိုင် (၃၂) နှစ်သည် ပဲတီစိမ်းခြွေနေစဉ် ခြွေလှည့်စက်အတွင်းသို့ ညာဘက် ခြေထောက် ထိခိုက်မိသည့် အတွက် ဒူးခေါင်းအောက်ပိုင်း ဖြတ်ပစ်ခဲ့ရပြီး ယခု ဒုတိယအကြိမ် ပေါင်ရင်းမှထပ်မံ၍ ဖြတ်တောက် ရမည် ဖြစ်သည့်အတွက် ကိုထွန်းမင်းနိုင်၏ ခွဲစိတ်ကုသမှုအတွက် သွေးလိုအပ်နေကြောင်း သိရှိရသည်။ လိုအပ်သော သွေးအမျိုးအစားမှာ B (ဘီ) သွေးအမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည့် အတွက် ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူမှ လှူဒါန်းမည်ဟု ပြောဆိုကာ ပြည်မြို့ ဆေးရုံကြီးသို့ သွားရောက်ကာ လူနာအား အားပေး စကားပြောကြား၍ လိုအပ်သော သွေးအား လှူဒါန်းခဲ့သည်။
ယင်းနေ့ ၂၈.၇.၂၀၁၀ (ဗုဒ္ဓဟူး) နေ့ ည (၇း၀၀) နာရီတွင် ရွှေပေါက်ပင်ဆရာတော် ဘုရားကြီး ၏ ဆရာရင်းဖြစ်သော ဘ၀နတ်ထံပျံလွန် သွားတော်မူပြီးဖြစ်သော ကမ္ဘာ့ရွှေရင်အေး ဆရာတော် (ရွှေဗျိုင်းနားဆရာတော်ကြီး) ၏ သက်တော် (၁၀၅) နှစ်ပြည့် ပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနားကို သံဃာတော် များ၊ သီလရှင်များ၊ တပည့်ဒါယကာ ဒါယကာမများနှင့် ရတနာမာန်အောင်ကျောင်းတွင် ကျင်းပရာသို့ ရွှေပေါက်ပင်ဆရာတော် ဘုရားကြီးနှင့်အတူ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူနှင့် ဦးသန်းစိန်တို့အဖွဲ့သည် သွားရောက်ပူဇော်ကန်တော့ ခဲ့ပါသည်။
၂၉.၇.၂၀၁၀ (ကြာသပတေး) နေ့တွင် ရတနာမာန်အောင် ကျောင်းဝင်းအတွင်းရှိ ရွှေဗျိုင်းနား ဆရာတော်ဘုရားကြီး၊ ယက်ကန်းစဉ်တောင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး၊ တစ်သုံးလုံး ဆရာတော် ဘုရားကြီး တို့၏ ရုပ်ထုတော်များ ထားရှိရာ အဆောင်အတွင်းသို့ ရွှေပေါက်ပင်ဆရာတော် ဘုရားနှင့် အတူ သွားရောက်၍ သင်္ကန်းများ ဆပ်ကပ်လှူဒါန်း ပူဇော်ခဲ့ကြသည်။ နေ့လည် (၂း၀၀) နာရီခန့်တွင် ပြည်မြို့ ပရဟိတလူငယ်အဖွဲ့မှ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ကာ O (အို) သွေးအမျိုးအစား တစ်လုံး လိုအပ် ကြောင်း ပြောကြားသည့်အတွက် ဦးသန်းစိန်မှ သွားရောက်ပြီး လှူဒါန်းခဲ့သည်။ လူနာ၏ အမည်မှာ ဦးလေးကြည် (၆၆) နှစ် ၀က်တောရွာ၊ ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်မှ ဖြစ်ပြီး အစာအိမ် သွေးကြောပေါက်၍ ခွဲစိတ်ရမည့် လူနာဖြစ်သည်။ ဦးသန်းစိန်နှင့်အတူ ပြည်မြို့ ပရဟိတလူငယ်အဖွဲ့မှ ကိုဇော်လတ်အောင် သည်လည်း ကိုဘိုစန်း (၃၃) နှစ် ကိုင်းစုရွာ၊ ရွှေပန်းတောအခြေစိုက်၊ အောင်လံမြို့သည် ၀မ်းဗိုက်တွင် ဓါးထိုးခံရ၍ ခွဲစိတ်ကုသရန် သွေးလိုအပ်ပါ၍ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့သည်။
၃၀.၇.၂၀၁၀ (သောကြာ) နေ့နံနက်တွင် ဗုဒ္ဓဆင်းတုများအား ရေချမ်းသပ္ပါယ်ခြင်း၊ သစ်သီး ဆွမ်းကပ်လှူခြင်း၊ ဗုဒ္ဓစွယ်တော်အား ပူဇော်ကန်တော့ခြင်း၊ သံဃာတော်များအား အာရုံဆွမ်း ဆက်ကပ်ခြင်း၊ ရွှေပေါက်ပင်ဆရာတော် ဘုရားကြီးအား နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း၊ ရေစက်သွန်း ချ အမျှဝေခြင်းများ ပြုလုပ်ကာ ရန်ကုန်မြို့သို့ နေ့လည် (၁၂း၀၀) နာရီတွင် ပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် မိမိတို့ ခရီးစဉ်ရည်ရွယ်ချက်သည် ရွှေပေါက်ပင်ဆရာတော်ကြီးအား ၀ါတွင်း ဆွမ်းကပ်ရန် ဖြစ်သော်လည်း ရွှေဗျိုင်းနား ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သက်တော် (၁၀၅) နှစ် ပူဇော်ပွဲနှင့် ကြုံကြိုက်ခြင်း၊ အရေးပေါ် ခွဲစိတ်ကုသရန် သွေးလိုအပ်သော လူနာများအား တိုက်ရိုက် သွေးလှူဒါန်းခွင့် ရရှိခဲ့ခြင်း တို့ကြောင့် တစ်ချက်ခုတ် သုံးချက်ပြတ် ဒါနကုသိုလ် ခရီးစဉ်ဟု သတ်မှတ်နိုင်ပါတော့သည်။
ပြည်သူကျွေးသော ထမင်းကိုစားသောက်နေပြီး ပြည်သူတွေကိုလဲ ကိုယ်နိုင်တဲ့ ဘက်က နေပြီးပြန်လည် ကူညီနိုင်သောလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင် သင့်တယ်ဆိုတာကိုတော့မမေ့သင့် မမေ့အပ်ပါဘူး.
မြန်မာပြည် ရှိပြည်သူများက မေတ္တာ တရားများနှင့် အားပေး နေပြီ ပြည်သူများက လေးစားလျက် ရှိအောင်ပြည်သူ တွေအတွက် ပြန်လည် ပေးဆပ်မှုများကို အနုပညာရှင် ဖြစ်တဲ့ ဘဘဦးသုခ တို့လို ကိုကျော်သူ ကို နမူနာယူသင့်ပါတယ်. မြန်မာပြည်သူ့တွေ အတွက် ပြန်လည် ပေးဆပ်မှုတွေ လုပ်သင့်ပါတယ်.။
မြန်မာပြည်သူတွေကျွေးတဲ့ ထမင်းနဲ့ စားသောက်နေကြပြီ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် တကယ် အတုယူနိုင်တဲ့ဇာတ်ကားများကိုသရုပ်ဆောင်သောလုပ်ငန်းများ သာပြုလုပ်သင့်ပါတယ်.။မြန်မာအမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်များ မလုံတလုံ အဝတ်အစားများ၊ မပေါ်တပေါ် အဝတ်အစားများ ကိုလဲမဝတ်သင့်ပါဘူး.။ဆယ်ကျော်သက်မြန်မာမလေးများ၏အတုယူစရာ အဝတ်အစားများ သာဝတ်သင့် ပါသည်.။
ကျမတို့ လူငယ်အရွယ်တုံးက ခေတ်စား ခဲ့သော စိုးမြတ်သူဇာရဲ့စတိုင်၊ စိုးမြတ်သူဇာလို ဆံပင် အရှည် များကို
ကျမတို့ လူငယ်တွေ လိုက်ထား ကြပါတယ်.၊နောက်စိုးမြတ်သူဇာလို မြန်မာအကျီင်္လေးတွေ လိုက်ဝတ်ခဲ့ ကြပါတယ် ထမီတိုတို လေးတွေ နဲ့ရှပ်အကျီင်္တွေဝတ်ကြတဲ့ ခေတ်တခေတ် တောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.။ မဟေမာရဲ့ စတိုင်ဆိုလဲ မဟေမာရဲ့ အကျီင်္လေးတွေကို လိုက်ချုပ်ကြ လိုက်ဝတ်ကြတာပါ။
အခုတော့မြန်မာကားကြည့်လိုက်ရင် ထမီတောင် မဝတ်ကြတော့သလို ဖော်ပြ ချွတ်ပြ နေတာ တွေဟာ တကယ်အမြင် မတော်တာတွေပါ ၊ကိုယ်ရဲ့ အနုပညာ တော်တာ ဖော်စရာမလိုသလို ချွတ်စရာလဲ တကယ်မလိုပါဘူး။သူ့ခေတ်နဲ့ သူ့စတိုင်တွေ ပြောင်းလဲလာခဲ့တာ လက်ခံပါတယ်.၊ခေတ်မှီတာနဲ့ခေတ်ဆန်တာ မတူသလိုဖော်ပြ ချွတ်ပြတာလဲ ခေတ်မှီတာ မဟုတ်သလို ခေတ်ဆန်တာလဲမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ရဲ့ ဝတ်စား ဆင်ယင်မှုဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ပင်ကိုယ် စိတ်ဓာတ်ကို ပြသနေတာ တစ်ခုပါဘဲ၊ဆွဲဆောင်မှုရှိ အောင်ပြုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဖြင့်အမှားကြီးမှားနေတာသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အနုပညာကို မြတ်နိုး တယ် တန်းဘိုးထားတတ်တဲ့ အနုပညာသည် တယောက်က ဒီလိုနေပြ လုပ်ပြနေမှ ကိုယ့်အနုပညာ အောင်မြင်လာမှာ မဟုတ်သလို ကိုယ့်ကိုသဘောကျ ပြီး မြန်မာအမျိူးသမီးလေးတွေ လိုက်အတုခိုးပြီးဝတ်ကြ မှာကိုလဲအထူးသတိ ပြုသင့်ပါတယ်.။
ပြည်သူကျွေးသော ထမင်းကိုစားသောက်နေပြီး ပြည်သူတွေကိုလဲ ကိုယ်နိုင်တဲ့ ဘက်က နေပြီးပြန်လည် ကူညီနိုင်သောလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင် သင့်တယ်ဆိုတာကိုတော့မမေ့သင့် မမေ့အပ်ပါဘူး.။ ပြည်သူအကျိူးပြု ဇာတ်လမ်းတွေ ရိုက်တယ် ဆိုတာလဲ အမှန်တကယ် ဇာတ်လမ်းတွေသာ ရိုက်သင့် သရုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်.။
ကော်လံဖားပြီး အကယ်ဒမီ ရွှေစင်ရုပ်ဆု ကိုမရမှာ ကြောက်ပြီး သမိုင်းတရားခံတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး ။ ကိုယ့်ရဲ့ အနုပညာကို ကိုယ်တကယ် တန်းဘိုးထား ရင်တော့ ကော်လံဖားတဲ့ ဇာတ်ကားများကိုမဖြစ်မနေ သရုပ်ဆောင် ရမယ် ဆိုရင်တောင် ပြည်သူတွေ ရဲ့ မျက်နှာကို အမှန်တကယ် ကြည့်ပြီး ပြည်သူ့ အနုပညာရှင် ဖြစ်ဘို့ကို သာ အမှန်တကယ်လုပ်သင့်ပါကြောင်း ကျမ အမြင်တခု အနေနဲ့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်.။
စစ်အာဏာရှင်လူသတ်သမားဦးသန်းရွှေ ရဲ့ ခရီးစဉ် အိန္ဒိယ မြန်မာ ဆက်ဆံရေး ဆွေးနွေးခန်းနှင့်မြန်မာပြည်သတင်းများ
နိုင်ငံအချင်းချင်း ဆက်ဆံရာမှာ အမြဲတမ်းမိတ်ဆွေနဲ့ အမြဲတမ်း ရန်သူဆိုတာမရှိဘဲ အမြဲတမ်း အကျိုးစီးပွားသာရှိတယ်ဆိုတဲ့ စကားကို မြန်မာ-အိန္ဒိယဆက်ဆံရေးက သက်သေပြနေပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးရဲ့  ဒုတိယမြောက်ခရီးစဉ်ကြောင့် အိန္ဒိယ-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးကို တဆင့်တိုးမြှင့်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ မြန်မာ့သယံဇာတကို ပြိုင်ဆိုင်ထုတ်ယူတဲ့နေရာမှာ ထိုင်းက ပထမ၊ တရုတ်က ဒုတိယ၊ အိန္ဒိယက တတိယ လိုက်နေပါတယ်။ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာလည်း ဒီပုံစံအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်ဖြူရွှေလီ ရေနံနဲ့ ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းနဲ့ ဧရာဝတီရေအား လျှပ်စစ်တွေပြီးစီးသွားရင် တရုတ်ဟာ ပထမနေရာကို ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိန္ဒိယဟာ တတ်နိုင်သလောက် အမီလိုက်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းနေပုံရပါတယ်။
ဗမာအစိုးရကလည်း တရုတ်က ချည်းတဖက်သတ် လွှမ်းမိုးမှာကို စိုးရိမ်လာပုံရပါတယ်။ မြန်မာ့ဓါတ်ငွေ့ စီမံကိန်းမှာ ဒေါ်လာသန်းတထောင်ကျော် ရင်းနှီမြုပ်နှံဖို့ ဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာ အိန္ဒိယက ကြေညာပါတယ်။ အိန္ဒိယ အစိုးရပိုင်ကုမ္မဏီ (၂) ခု အစုရှယ်ယာ ပါဝင်တဲ့ ရွှေဓါတ်ငွေ့တွင်းက အိန္ဒိယကို ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း သွယ်ယူနိုင်ရေးအတွက် အင်္ဂလိပ်ကုမ္မဏီက လေ့လာထားပါတယ်။ ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းကိစ္စမှာ အိန္ဒိယဘက်က စိတ်ပျက်နေတာ အတော်ကြာပါပြီ။ ချင်းတွင်မြစ် ထမံသီ၊ ကလေးဝ နဲ့ ဟုမ္မလင်း ရေအားလျှပ်စစ်တွေ တည်ဆောက်ဖို့လည်း အိန္ဒိယက စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ သံဃာဦးဆောင်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲ ရန်ကုန်မှာ ဖြစ်ပွားတုန်း အိန္ဒိယ ရေနံဝန်ကြီး ပျဉ်းမနားကိုသွားပြီး ဒေါ်လာသန်းတရာကျော် ကုန်ကျမယ့် ကလတန် မြစ်ကြောင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ သဘောတူချက် ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်တွေမှာ ပင်လယ်ကူးသင်္ဘော ဆိပ်ကမ်းတည်ဆောက်ပြီး ကလတန် မြစ်ကြောင်းက အိန္ဒိယ အရှေ့ မြောက်ဒေသကို ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ရှာဖွေရေးကို အိန္ဒိယက တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ပေးဖို့ သဘောတူပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ထရပ်ကား စက်ရုံတည်ဆောက်ဖို့ အိန္ဒိယအစိုးရက ငွေရင်းစိုက်ထုတ်ပြီး တတာကုမ္မဏီ က တာဝန်ယူ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့လည်း သဘောတူထားကြပါတယ်။
ရေနံနဲ့ ဓါတ်ငွေ့ ရှာဖွေထုတ်ယူရေးမှာ လုပ်ကွက်အနည်းငယ် ကျန်နေပါသေးတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းဟာ ငွေရင်း အကြီးအကျယ် စိုက်ထုတ်ရတာမို့ ဗမာစစ်အစိုးရဟာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့  အကူအညီမပါဘဲ အကောင်အထည် မဖော်နိုင်ပါဘူး။ ဗမာစစ်အစိုးရဟာ ရေနံပီပါပေါင်း (၄) သောင်း နေ့စဉ်တင်သွင်း နေရပါတယ်။ ဒါကို ကြက်ဆူဆီနဲ့ အစားထိုးနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့် အကောင်အထည်ပေါ်ဖို့ အလားအလာ မရှိတော့ပါဘူး။ တနင်္လာရီကမ်းလွန်က သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ထိုင်းနိုင်ငံကို စတင်တင်ပို့ချိန်ကစပြီး ဗမာစစ်အစိုးရဟာ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ကို မှီခိုလာရပါတယ်။ အိန္ဒိယနဲ့ တရုတ်ကလည်း သဘာဝဓါတ်ငွေ့ လိုချင်တာမို့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ က ဝင်ငွေမရနိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေရောက်လာမှသာ ဗမာစစ်အစိုးရဟာ ပြည်ပက ဖိအားပေးတာမို့ ဂရုစိုက်လာလိမ့်မယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။
အိန္ဒိယ အရှေ့ မြောက်ပြည်နယ်တွေက တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ကို နှိမ်နှင်းရာမှာ ဗမာစစ်အစိုးရ အကူအညီ လိုအပ်တာဟာလည်း လက်တွဲရတဲ့အကြောင်းရင်း တခုဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယသူပုန်ကို တိုက်ထုတ်ဖို့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေ က ၂၀၀၄ အိန္ဒိယခရီးမှာ ဂတိပြုခဲ့ပေမယ့် မထိရောက်တဲ့အတွက် ဒီနှစ် ဇန်နဝါရီနှောင်းပိုင်းမှာ အိန္ဒိယပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး နေပြည်တော်ကို သွားရောက်ဆွေးနွေးရပါတယ်။ အခုတော့ မဏိပူရ်၊ အာသံ နဲ့ နာဂ ဒေသက တိုင်းရင်းသားသူပုန်တွေကို အိန္ဒိယအစိုးရတပ်က ထိုးစစ်ဆင်ရာမှာ မြန်မာပြည်ထဲအထိ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခွင့် ပေးထားကြောင်း သိရပါတယ်။ အခုဆိုရင် (၃) လတကြိမ် အိန္ဒိယ-မြန်မာ ထိပ်တန်းစစ်ဗိုလ်တွေ အစည်းအဝေး ထိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ အိန္ဒိယ ဆန့်ကျင်ရေး အကြမ်းဖက်သမားတွေကို နှိမ်နှင်းဖို့ ဝန်လေးနေတဲ့ ပါကစ္စတန်နဲ့ ဆက်ဆံနိုင်တဲ့ အိန္ဒိယအစိုးရဟာ ဗမာစစ်အစိုးရနဲ့ ချစ်ကြည်ရေးလုပ်တာ မဆန်းပါဘူးလို့လည်း သုံးသပ်ကြပါတယ်။
အိန္ဒိယ အိုင်တီလုပ်ငန်း Information Technology ကဏ္ဍရဲ့  ဝင်ငွေ (၆၅) ရာခိုင်နှုန်းဟာ နိုင်ငံခြားက လာတာပါ။ ဒီအထဲမှာ (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းဟာ အိုင်တီဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းက တိုက်ရိုက်ရရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေ ကလည်း ဒေါ်လာသန်း (၅၀) ကျော် အကုန်ခံပြီး ရတနာပုံဆိုက်ဘာမြို့ တော် တည်ဆောက်ထားတာမို့ အိန္ဒိယနဲ့ တရုတ် အကူအညီ လိုအပ်နေပါတယ်။ ရတနာပုံ ပထမအဆင့်ကို ၂၀၀၇ ဒီဇင်ဘာမှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာမို့ သက်တမ်း (၂) နှစ်ကျော် သွားပါပြီ။ ပြည်တွင်း ဆက်သွယ်ရေးအပြင် တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်း တို့ကို ကုန်းလိုင်းနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး အရှေ့ တောင်အာရှ၊ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းဒေသနဲ့ အနောက်ဥရောပကို ရေအောက်လိုင်းနဲ့၊ ဂြိုလ်တုတို့နဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
အိန္ဒိယနဲ့ ပူးတွဲဆောင်ရွက်မှုတွေ များလာလေလေ တရုတ်ကို မှီခိုမှု နည်းပါးလာလေလေပဲလိုပ ပြောကြပေမယ့် တရုတ်-မြန်မာ စီးပွားရေးထက် အဆပေါင်းများစွာ ကြီးမားတာမို့ တရုတ်ကို တန်ပြန်နိုင်ပါ့မလား ဆိုတာကို စဉ်းစားစရာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ တရုတ်ဦးရေ တိုးပွားလာသလို အိန္ဒိယပြည်သားဦးရေလည်း တိုးပွားလာနိုင်ပါတယ်။ အိန္ဒိယလူဦးရေဟာ သန်းပေါင်း (၁၁၀၀) ကျော်နေပြီး နောက်အနှစ် (၃၀) လောက်ဆိုရင် တရုတ်ထက်များလာလိမ့်မယ်လိုပ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) ဟာ နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် (ILO) နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဟာ နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် (ILO) နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး အလုပ်သမားအခွင့်အရေး ချိုးဖောက် ခံနေရမှုတွေ၊ လယ်မြေသိမ်းပိုက်မှုတွေ၊ ကလေးစစ်သား စုဆောင်းမှုတွေနဲ့ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ မနေ့က အိုင်အယ်လ်အို ဌာနေကိုယ်စားလှယ်နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ဒီကနေ့မှာတော့ ပဲခူးမြို့နဲ့ အနီးဝန်းကျင်က အဲန်အယ်လ်ဒီ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ သွားရောက် တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာ အဲန်အယ်လ်ဒီ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက အခုလို ပြောလိုက်တာပါ။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းထားတဲ့ ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာပြည်အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်ရှိ အကျင့်ပျက် ၀န်ထမ်း တွေရဲ့ လုပ်ရပ်
ပေးပို့ ပေးသော သူငယ်ချင်း ကိုလူချော အားကျေးဇူး တင်ရှိပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, July 30, 2010 Links to this post
မြန်မာ့ကြယ်ငါးပွင့်သင်္ဘောလုပ်ငန်း ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည်ဈေးနှုန်းထားပြောင်း
မြန်မာ့ကြယ်ငါးပွင့်သင်္ဘောလုပ်ငန်း ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်း ပုဂ္ဂလိကလွှဲပြောင်းပြီးသည့်နောက်ပိုင်း ပြည်တွင်းခရီးစဉ် ခရီးသည်လက်မှတ်ခဈေးနှုန်းနှင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်သည့် နှုန်းထားများ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားသည်ဟု သိရသည်။
ယခင်နှုန်းထားများမှာ ခရီးသည်တစ်ဦးလျှင် ရန်ကုန်- မြိတ် ကျပ် ၅၀၀၀ ခန့်၊ ရန်ကုန် - ကော့သောင်း ကျပ် ၈၀၀၀ ခန့်၊ ရန်ကုန် - စစ်တွေ ကျပ် ၈၀၀၀ ဖြစ်ပြီး ကုန်စည်ဈေးနှုန်းများမှာ တစ်တန်လျှင် ရန်ကုန် - မြိတ် ကျပ် ၄၉၀၀ ခန့်၊ ရန်ကုန် - ကော့သောင်း ကျပ် ၅၀၀၀ ခန့်၊ ရန်ကုန် - စစ်တွေ ကျပ် ၆၀၀၀ ဖြစ်သည်။ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်သော နှုန်းထားများမှာ ခရီးသည်တစ်ဦးလျှင် ရန်ကုန် - မြိတ် ကျပ် ၁၈၀၀၀၊ ရန်ကုန် - ကော့သောင်း ကျပ် ၂၆၀၀၀၊ ရန်ကုန် - စစ်တွေ ကျပ် ၂၆၀၀၀ ဖြစ်ပြီး၊ ကုန်စည်ပို့ခဈေးနှုန်းများမှာ ကုန်တစ်တန်လျှင် ရန်ကုန် - မြိတ် ကျပ် ၁၅၀၀၀၊ ရန်ကုန် - ကော့သောင်း ကျပ် ၁၈၀၀၀ ၊ ရန်ကုန် - စစ်တွေ ကျပ် ၁၈၈၀၀ ဖြစ်ကြောင်း 24/7 News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
မြန်မာ့ကြယ်ငါးပွင့်သင်္ဘောလုပ်ငန်း ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်း ပုဂ္ဂလိကလွှဲပြောင်းပြီးသည့်နောက်ပိုင်း ပြည်တွင်းခရီးစဉ် ခရီးသည်လက်မှတ်ခဈေးနှုန်းနှင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်သည့် နှုန်းထားများ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားသည်ဟု သိရသည်။ ယခင်နှုန်းထားများမှာ ခရီးသည်တစ်ဦးလျှင် ရန်ကုန်- မြိတ် ကျပ် ၅၀၀၀ ခန့်၊ ရန်ကုန် - ကော့သောင်း ကျပ် ၈၀၀၀ ခန့်၊ ရန်ကုန် - စစ်တွေ ကျပ် ၈၀၀၀ ဖြစ်ပြီး ကုန်စည်ဈေးနှုန်းများမှာ တစ်တန်လျှင် ရန်ကုန် - မြိတ် ကျပ် ၄၉၀၀ ခန့်၊ ရန်ကုန် - ကော့သောင်း ကျပ် ၅၀၀၀ ခန့်၊ ရန်ကုန် - စစ်တွေ ကျပ် ၆၀၀၀ ဖြစ်သည်။ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်သော နှုန်းထားများမှာ ခရီးသည်တစ်ဦးလျှင် ရန်ကုန် - မြိတ် ကျပ် ၁၈၀၀၀၊ ရန်ကုန် - ကော့သောင်း ကျပ် ၂၆၀၀၀၊ ရန်ကုန် - စစ်တွေ ကျပ် ၂၆၀၀၀ ဖြစ်ပြီး၊ ကုန်စည်ပို့ခဈေးနှုန်းများမှာ ကုန်တစ်တန်လျှင် ရန်ကုန် - မြိတ် ကျပ် ၁၅၀၀၀၊ ရန်ကုန် - ကော့သောင်း ကျပ် ၁၈၀၀၀ ၊ ရန်ကုန် - စစ်တွေ ကျပ် ၁၈၈၀၀ ဖြစ်ကြောင်း 24/7 News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း အမာမြို့နယ်၌ လေဆင်နှာမောင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် လူနေအိမ်အချို့ပြိုလဲပျက်စီးမှုနှင့် အမိုးလန်ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့
ဧရာဝတီတိုင်း အမာမြို့နယ်၌ ဇူလိုင် ၂၅ရက်နေ့တွင် လေဆင်နှာမောင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် လူနေအိမ်အချို့ ပြိုလဲ ပျက်စီးမှုနှင့် အမိုးလန်ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ လူတစ်ဦးသေဆုံးပြီး ခုနှစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ဧရာဝတီတိုင်း အမာမြို့နယ် ဒေါ်ငြိမ်းကျေးရွာအုပ်စု ခါးပြတ်ကျေးရွာ၌ ဇူလိုင် ၂၅ရက် မွန်းလွဲ ၂နာရီ ၄၅မိနစ်ခန့်မှ ၂နာရီ ၅၅မိနစ်ခန့်တွင် လေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် ရပ်ကွက် (၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆) တို့မှ လူနေအိမ်အချို့ ပြိုလဲပျက်စီးပြီး လူနေအိမ်အချို့ အမိုးလန်ပျက်စီးကာ အမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံး၍ အမျိုးသား၊ အမျိုး သမီး ခုနှစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြကြောင်း၊ တာဝန်ရှိသူများက လေဘေးသင့်ဒုက္ခသည်များအား ခါးပြတ်ကျေးရွာ အခြေခံ ပညာ မူလတန်းကျောင်းနှင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းတို့၌ယာယီပြောင်းရွှေ့နေရာချထားပေးခဲ့ရသည့်သတင်းအား
ဇူလိုင်လ ၂၉ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံ သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။
မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအီးလ် အတ္ထုပ္ပတ္တိ စာအုပ်ကိုဘာသာပြန်ဆိုရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည့် စာရေးဆရာဟိန်းလတ်းအားဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်
ကင်ဂျုံအီးလ် အတ္ထုပ္ပတ္တိ စာအုပ်ကို ဘာသာ ပြန်ဆို ရေးသား ထုတ်ဝေ ခဲ့သည့် စာရေး ဆရာ ဟိန်းလတ်အား ဧရာဝတီ သတင်းထောက် ဝေမိုးက ယင်း စာအုပ် ပြန်လည် သိမ်းဆည်းမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆက်သွယ် မေးမြန်း ထားပါသည်။
ဖြေ။ ။ တိန့်ရှောင်ဖိန် အကြောင်းတုန်းက ငယ်ငယ်တုန်းက ကောင်းတယ်၊ ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေးမှာ ဒုက္ခရောက်တယ်၊ လေးဦး ဂိုဏ်းက နှိကွပ်၊ နောက်ပိုင်း ပြန်ပြောင်းသွားတယ်၊ အကောင်းအဆိုး အကုန်ရေးတယ်၊ ဒီစာအုပ်မှာတော့ မကောင်းတာမပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် သူတို့မူဝါဒ သူတို့နိုင်ငံက တရားဝင်ထုတ်တဲ့စာအုပ် မဟုတ်ရင်ဘယ်ဟာကိုမှ ခွင့်မပြုဘူး၊ နောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောရရင် ဘယ်လောက်ပဲ သူတို့ခေါင်းဆောင်ကို ကောင်းပါတယ်လို့ ချီးမွမ်းဦး သူတို့ထုတ်တာ မဟုတ်ရင် မကြိုက်ဘူး။
ဗိုလ်ကြီးဝင်းထိန်နှင့် အင်တာဗျူး (ရုပ်သံမြင်ကွင်း)
နအဖ စစ်အာဏာရှင် လူသတ်သမားများ၏ ပထွေး မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Pak Ui Chun မြန်မာနိုင်ငံကို ဒီနေ့ က စပြီး ရောက်ရှိ
မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Pak Ui Chun ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ဒီနေ့ က စပြီး ရောက်ရှိနေပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေ ပြန်လာမယ့် နအဖနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဥာဏ်ဝင်းကို နေပြည်တော်မှာ သွားရောက်တွေ့ ဆုံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၈၃ ခုနှစ်က မြန်မာပြည်မြေပေါ်မှာ လာရောက်ပြီး မြန်မာပြည်သူတစ်ရပ်လုံး လေးစားဦးညွှတ်ကြတဲ့ အာဇာနည်ဗိမာန်ကို ဗုံးခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တာကို နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့လူမျိုးတစ်ရပ်အနေနဲ့တရားဝင် တောင်းပန်ခြင်းမပြုသေးတဲ့အပြင် ယခုလည်း မြောက်ကိုရီးယားတွေက မြန်မာလူမျိုးအပေါ် ထပ်မံစော်ကားလိုက်ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားအရေး လေ့လာသူ Bradley K. Martin ရေးသားတဲ့ Under the Loving Care of the Fatherly Leader: North Korea and the Kim Dynasty စာအုပ်ကို မြန်မာစာရေးဆရာ ဟိန်းလတ်ကနေ “ကင်မ်ဂျုံအီ (သို့မဟုတ်) မြောက်ကိုရီးယား၏ ချစ်လှစွာသော ခေါင်းဆောင်ကြီး” အမည်တပ်ထားတဲ့ မြန်မာဘာသာပြန်စာအုပ်ရေးသားခဲ့တာကို ရန်ကုန်မှာ ရှိတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားသံရုံးက မြောက်ကောင်တွေက အတင်းအဓမ္မ ပြန်လည်သိမ်းခိုင်းပြီး စာအုပ်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ကို မီးရှို့ ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါတယ်။
ဒီစာအုပ်မှာ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကြီး ကင်မ်ဂျုံအီရဲ့ဘ၀အကြောင်းကို လေ့လာပြုစုရေးသားထားတာဖြစ်ပြီး သူတို့မြောက်ခေါင်းဆောင်ကြီးကို အနောက်နိုင်ငံတွေက ဝေဖန်ထားတာတွေ သူတို့မြောက်တွေရဲ့ဝါဒဖြန့် ချီမှုလုပ်ရပ်တွေကို ထည့်သွင်းရေးသားထားတာကြောင့် မြောက်ကောင်တွေ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး မူရင်းအင်္ဂလိပ်စာအုပ်ကိုတင်မက ဘာသာပြန်တဲ့ မြန်မာစာရေးဆရာကို ပြဿနာလုပ်တာ မြန်မာစာရေးဆရာရဲ့ ဘာသာပြန်စာအုပ်ကို မီးရှို့ ဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတာ မြန်မာလူမျိုးတစ်မျိုးလုံးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကို မြန်မာမြေပေါ်မှာ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် စော်ကားပြုမူလိုက်ခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို မြန်မာလူမျိုးတွေအပေါ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာ မိုက်ရိုင်းစွာ စော်ကားရိုင်းပြတဲ့ မြောက်ကောင်တွေကို အိမ်တိုင်ယာရောက် ဖိတ်ခေါ်ပြီး သွားကြီးတဖြီးဖြီးနဲ့ကြိုဆိုလက်ခံတွေ့ ဆုံမယ့်သူတွေကတော့ နအဖခေါင်းဆောင်ကြီး သန်းရွှေနဲ့နအဖနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဥာဏ်ဝင်းတို့တစ်တွေဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုယ်ရဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကို တစ်ကြိမ်မက ထပ်မံစော်ကားနေတဲ့ မြောက်ကောင်တွေနဲ့နအဖအမျိုးသားသစ္စာဖောက်တွေကို ဒီအတိုင်း လက်ပိုက်ကြည့်နေကြရင်တော့ မြန်မာလူမျိုးဆိုတာ တိုင်းတစ်ပါးမြေပေါ်မှာ အစော်ကားခံနေကြရတာထက် ပိုဆိုးတဲ့ ကိုယ့်မြန်မာမြေပေါ်မှာတင် အစော်ကားခံနေရတဲ့ လူမျိုးတွေ ဖြစ်နေပါပြီ။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, July 29, 2010 Links to this post
လူသတ်သမားစစ်အာဏာရှင်ဦးသန်းရွှေတို့ရဲ့ ၅ ရက်ကြာ အိန္ဒိယ ခရီးစဉ်အတွင်း ဓာတ်ပုံများက ပြောသောရင်တွင်းစကားများ
လူသတ်သမား စစ်အာဏာရှင် ဦးသန်းရွှေ တယောက် ဘုရားသွားကျောင်းတက်တာတောင်စစ်ဝတ်စုံကိုမချွတ်တာခုတော့အိန္ဒိယသွားတာ ချွတ်သွားပုံထောက်ရင်ဖြင့် ကလိန်ကျဘို့ပြင်နေတာသိသာထင်ရှာနေတာပါ၊အိန္ဒိယသမ္မတ ပရာတီဘာ ပတေးလ် (Pratibha Patil)၊ ဝန်ကြီးချုပ် မန်မိုဟန် ဆင်းဂ် (Manmohan Singh) ၊တို့ကိုပုံစံတမျိုးနဲ့မရိုးရအောင်သွေးဆောင်တော့မယ် သူလိုချင်တာရဘို့ကတော့ရှက်ကြောနဲ့ချက်ကြောကိုမှားဖျက်မိတဲ့လူသတ်သမားစစ်အာဏာရှင်
လူသတ်သမားစစ်အာဏာရှင်ဦးသန်းရွှေနှင့် အကြံပေးဒေါ်မကြိုင်ကြိုင်တို့ရဲ့ လိုချင်တာတွေလဲရ အကြွေးလဲ ဆပ်ဘို့ရွေးဆိုင်းပေးလိုက်တော့ ပြုံပျော်မဆုံး ဖြစ်နေတဲ့ မျက်နှာတွေ မြန်မာပြည်သူတွေကတော့အိန္ဒိယဆီကယူထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ နဲ့ အတိုးတွေကိုဆပ်ရတော့မယ်
လူသတ်သမား စစ်အာဏာရှင်ဦးသန်းရွှေတယောက် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ စာချုပ် ၅ ခုထက် မနည်းကိုလည်း နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးဘို့ ဘယ်လိုတွေ ယုံအောင်ပြောရမလဲ ဆိုတာ တွေးတောနေပုံ တစ်ခုပေါ့
အိန္ဒိယနိုင်ငံက ငြိမ်းချမ်းရေး ဗိသုကာကြီး မဟတ္တမဂန္ဒီရဲ့ ဂူဗိမာန်ကို သွားရောက် ဂါရဝပြုခဲ့ရပြီးငြိမ်းချမ်းရေး ဗိသုကာကြီး မဟတ္တမဂန္ဒီရဲ့ရုပ်တုကိုလဲပေးအပ်လိုက်ပုံကတော့လူသတ်သမားစစ်အာဏာရှင်ဦးသန်းရွှေကို အိန္ဒိယကနားလည်ပါးရိုက်လိုက်ပုံတစ်ခု
လူသတ်သမားစစ်အာဏာရှင်ဦးသန်းရွှေဟာအိန္ဒိယက EXIM ဘဏ်ကနေ မြန်မာကို ချေးထားတဲ့ ချေးငွေ ဒေါ်လာ သန်း ၆၀ ကို ဆက်ပြီး သက်တမ်းတိုး ချေးနိုင်ဘို့ဘယ်လို ကလိန်ကျရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားတွေးတောနေသောမျက်နှာ
လူသတ်သမားစစ်အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်ဦးသန်းရွှေတို့ဇနီးမောင်နှံအားအိန္ဒိယခရီးစဉ်မှာ ဗေဒင် ယတြာ ဟူးရားဆရာ တို့၏ ညွှန်ကြားချက် အရ ဒီလိုတွေ လုပ်ခိုင်းလိုက်လို့ မြန်မာပြည်သူတွေကို မတရားသတ်ထားတဲ့ သွေးစွန်း
လူသတ်သမားစစ်အာဏာရှင်ဦးသန်းရွှေ ကိုတော့ အကြံပေးအရာရှိ ဒေါ်မကြိုင်ကြိုင် က သူတို့ပေးတာကိုယူလိုက်
ဘာမှ ပြန်မတုံပြန်နဲ့ နော်လို့ မှားထားပုံဘဲ သူတို့လဲ ပေးချင်တာ ပေး
လူသတ်တဲ့ အလုပ်က လဲ ကျမတို့ အလုပ်
Labels: ဓာတ်ပုံတွေက ပြောသောစကား
အခွန်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ထားခြင်းမရှိသောစီးကရက်၊အရက်၊ဘီယာနှင့်ရေသန့် ဘူးများကိုရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးမြို့ကြီးများတွင်ဇူလိုင်လဆန်းပိုင်းမှစတင်၍ လိုက်လံသိမ်းဆည်
သတ်မှတ်ထားသည့် ပညာပေးကာလ ကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်၍ အခွန်တံ ဆိပ်ကပ်နှိပ်ထားခြင်းမရှိသော စီးကရက်၊ အရက်၊ ဘီယာနှင့်ရေသန့် ဘူးများကို ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့ကြီးများတွင် ဇူလိုင်လဆန်းပိုင်းမှ စတင်၍ လိုက်လံ သိမ်းဆည်းနေပြီဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ယခုနှစ် ဧပြီလ မှ ဇွန်လအထိ သုံးလ အတွင်း အခွန်တံဆိပ်မပါသော ပစ္စည်း များကို ရောင်းချခြင်းမပြုရန် ပညာပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဇူလိုင် လမှစ၍ ရန်ကုန် နှင့် မန္တလေး မြို့တို့ရှိ စတိုး ဆိုင်ကြီးများ၊ ဈေးများရှိ လက်ကားအရောင်းဆိုင်ကြီး များနှင့် စူပါမားကက်များ တွင် လိုက်လံ သိမ်းဆည်းခြင်းဖြစ်သည်။
"သိမ်းဆည်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲမှာ ပြည်တွင်းဖြစ် စီးကရက်အများစုက တော့ အခွန်တံဆိပ်ပါတာများပါတယ်။ နိုင်ငံ ခြားက တရားမ၀င်ရောက်လာတဲ့ စီးကရက်တွေကိုတော့ အနိမ့်ဆုံး ငါးရာခိုင်နှုန်း သတ် မှတ်ပြီး အခွန်ပေး ဆောင်စေမှာပါ။ အရက်နဲ့ ဘီယာတွေ ကိုတော့ ကုန်စည်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး တန်ဖိုးသတ်မှတ်မှာပါ။ ပြည် တွင်းထုတ် ရေသန့်တွေမှာ အခွန်ပါပြီး ဖြစ်လို့ ရေသန့်သိမ်းဆည်းရမှုက မရှိ သလောက်ပါပဲ"ဟု ပြည်တွင်းအခွန် ဦးစီးဌာနမှ တာဝန် ရှိသူတစ်ဦးက မြန်မာတိုင်း(မ်)ကို ပြောကြားသည်။
ထိုင်း နှင့် တရုတ်နယ်စပ်တို့မှ တင်သွင်း လာသည့် အခွန်တံဆိပ်ခေါင်း မပါ သော စီးကရက်၊ အရက်၊ ဘီယာနှင့် ရေသန့်ဘူးများကို ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက် နေ့က မန္တလေးဈေးချိုရှိ ဆိုင်ကြီးများ တွင် လိုက်လံသိမ်းဆည်းခဲ့သည်။
"လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကတည်းက အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းမပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကို မရောင်းဖို့ သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ် ၂၀၁၀ မှာတော့ ဖေဖော်ဝါရီ၊ မတ်လလောက်မှာ သတိပေးနှိုးဆော်မှုတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဇူလိုင်လမှာတော့ ရောင်းနေတဲ့ဆိုင်တွေက အဲဒီပစ္စည်းတွေ ကိုသိမ်းပါတယ်။ သတိပေးပြီးသား ဖြစ်လို့ ဆိုင်ရှင်တွေလည်း အသိမ်းခံရပါတယ်"ဟု မန္တလေးအဆင့်မြင့် ဈေးချိုတော်မှစားသောက် ကုန်လက်လီ လက် ကားဆိုင်ရှင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
သိမ်းဆည်းသောပစ္စည်းများအနက် မန္တလေးဈေးကွက်၌ စီးကရက်မှာနယ်စပ်မှဝင်ရောက်မှု အများဆုံးဖြစ်ပြီးအခွန်တံဆိပ်ခေါင်းမပါ သောတံဆိပ် အများအပြားရှိကြောင်း၊ ဈေးကွက်တွင် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းဝင်ရောက်မှုရှိပြီး အရောင်း ရ တွင်ကျယ်ကြောင်းသိရသည်။
"အခုသိမ်းဆည်းနေတဲ့ အခွန် တံဆိပ်ခေါင်းမပါတဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာ စီးကရက်က အများဆုံးပါ။ အရက်၊ ဘီယာတွေက နည်းပြီး ရေ သန့်တွေက တော့ မန္တလေးဈေးကွက်မှာမရှိ သလောက်ပါပဲ။ ဘီယာ၊အရက်နဲ့ ရေသန့်ကပြည်တွင်းထုတ်တွေကိုအသုံး များပါတယ်။ နယ်စပ်တွေမှာသာ ပြည် တွင်းရေသန့်ထက် ဈေးသက်သာပြီး ပစ္စည်းပေါလို့ ပြည်ပကအခွန်တံဆိပ်ခေါင်းမပါတဲ့ရေသန့်တွေကို သုံး ကြပါ တယ်"ဟု စီးကရက်၊ အရက်နှင့် ဘီယာ များကိုအဓိကရောင်းချသည့်လက်ကား ဆိုင်ရှင်ကြီးတစ်ဦးက ဆိုသည်။
ပြည်တွင်းဖြစ် အရက်၊ ဘီယာနှင့် နိုင်ငံခြားဖြစ်အရက်၊ ဘီယာများကိုသိမ်းဆည်းရာ၌ သိမ်းဆည်းထားသည့် ပြည်တွင်းဖြစ် အရက်၊ ဘီယာများကို သတ်မှတ် ထားသည့် အခွန်အခ ပေး ဆောင်ပြီးပါက ပြန်လည် ရောင်းချ ခွင့်ပြု မည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားဖြစ် အရက်၊ ဘီယာများကိုမူ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းအဖြစ် သတ်မှတ်၍ ပြည်တွင်းအခွန်ဌာနမှ အကောက်ခွန်ဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးမည်ဖြစ်ကာ အကောက် ခွန်ဌာန နည်းဥပဒေများအတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း မန္တလေးတိုင်း ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာန ထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းမပါသော ကုန် ပစ္စည်းများကို သိမ်းဆည်းသဖြင့် ပြည် တွင်းစီးကရက်တချို့ ရောင်းအား နှင့် ဈေးနှုန်း ရာခိုင်နှုန်း အနည်းငယ် မြင့် တက်လာကြောင်းသိရသည်။
"အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းမပါတဲ့ စီးကရက် တွေကိုသိမ်းတော့ ပြည်တွင်း စီးကရက် တံဆိပ် တချို့ ရောင်းအားနဲ့ ဈေးနှုန်မြင့် တက်လာပါ တယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလား ဘော လုံးပွဲကာလက ပြည်တွင်း စီးကရက်တံဆိပ်သစ်တချို့က ရောင်းအား မြှင့်တင်ရေးအရမ်းလုပ်ထားတော့ ရောင်းအားတက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း မူလကရှိတဲ့ တံဆိပ်ဟောင်းတွေထက် အသစ်ထိုး ဖောက်လာတဲ့ တံဆိပ်တွေ ပိုရောင်းရနေ တယ်။ ဈေးနှုန်းကလည်း ၁၀ ဘူးပါတစ်တောင့်ကို ကျပ် ၂၀၀၊ ၃၀၀ လောက်တက်လာပါတယ်" ဟု ဆိုင်ရှင်တစ်ဦးက ပြောဆိုခဲ့သည့်အကြောင်းအား မြန်မာတိုင်း(မ်)ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြပါရှိသည်.။
သင်္ဘောသားအချို့ကို လိမ်လည်သင်္ဘောတင်ပေးခဲ့သည့်အမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွား
ပြည်တွင်းရှိ သင်္ဘော အေးဂျင့်တစ်ခုမှ သင်္ဘောသားမှတ်ပုံတင် တရားဝင်ရရှိထားသော သင်္ဘောသားငါးဦး အား လိမ်လည်လှည့်ဖြားပြီးသင်္ဘောတင်ပေး ခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မြန်မာ နိုင်ငံ ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောသားများအသင်း (MOSA)မှ သိရသည်။
အဆိုပါသင်္ဘောအေးဂျင့်၏ လိမ် လည်မှုကြောင့် ယင်းသင်္ဘောသားငါးဦးမှာ တစ်ဦးလျှင် ငွေကျပ်၁၅သိန်းနီးပါးခန့် ဆုံးရှုံး ခဲ့ပြီး ရသင့်ရထိုက်သည့်လစာငွေများလည်း အပြည့်အ၀မရရှိသေးကြောင်း MOSA မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
''ဒီသင်္ဘောက ပိပိရိရိနဲ့ကို အကွက် ဆင်ပြီး လိမ်လည်သွားတာပါ။ သင်္ဘောသား တွေကလဲ သင်္ဘောပေါ်ရောက်မှ အလိမ်ခံ ရမှန်း သိတယ်။ အဲဒီသင်္ဘောသားငါးဦးရဲ့ ကုန်ကျခဲ့တဲ့ဝန်ဆောင်ခတွေနဲ့ ရမယ့်လစာ တွေကို ကျွန်တော်တို့ MOSA က အတတ် နိုင်ဆုံး ပြန်လည်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်နေ ပါတယ်။ တချို့တစ်ဝက်လဲ ပြန်လည်ရရှိနေ ပါပြီ''ဟု ယင်းက ထပ်မံပြောသည်။
''တကယ်တော့ သင်္ဘောသားက စုစုပေါင်း ၁၃ဦး၊ တရားဝင်စီဒီစီရရှိထားတဲ့ သင်္ဘောသားက ငါးဦး၊ သင်္ဘောသား ၁၃ဦး ထဲကရှစ်ဦးကို အဲဒီအေးဂျင့်က ပထမအသုတ် အနေနဲ့ ဒီနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀မှာ စလွှတ်လိုက် တယ်။ သင်္ဘောသားရှစ်ဦးက သင်္ဘောပေါ် ရောက်မှ လိမ်မှန်းသိလို့ ရန်ကုန်ကအေးဂျင့် ကို ဖုန်းဆက်ပြီးပြောတာတောင် အေးဂျင့် က နောက်ထပ်ငါးဦးကို မတ် ၁၈ရက်က ထပ်လွှတ်လိုက်တယ်''ဟု ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ ခဲ့ရသည့် သင်္ဘောသားတစ်ဦးကပြောသည်။
''အဲဒီအေးဂျင့်ကလဲ ကျွန်တော်တို့ ရှစ်ဦးကို ပထမအသုတ်အနေနဲ့ အာဖရိက က MTDUKE သင်္ဘောကို လွှတ်လိုက် တယ်။ အေးဂျင့်ပြောတော့ ဆီတင်သင်္ဘော မှာ အလုပ်လုပ်ရမယ်၊ အာဖရိကမှာ သင်္ဘော ပြောင်းပြီး ဆက်သွားရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့သင်္ဘော က ဆီတင်သင်္ဘောဖြစ်ပေမယ့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ စစ်တကောင်းကို သင်္ဘောဖျက်ဖို့သွား ရမယ့် သင်္ဘောဖြစ်နေတယ်။ သင်္ဘောပေါ် မှာ ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးနဲ့ ဂရိနိုင်ငံသား တွေပဲပါတယ်''ဟု ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသူတစ်ဦး က ပြောသည်။
''မေ၂၄ရက်မှာ ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ ပေးမယ့် သင်္ဘောအေးဂျင့်ရဲ့ မန်နေဂျင်းက သင်္ဘောသား ၁၃ဦးကို မင်းတို့လစာငွေတွေ မရောက်သေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ မင်းတို့ကုန်ကျ ခဲ့တဲ့ ၀န်ဆောင်ခကိုတော့ အဆင်ပြေသလို တစ်ဦးချင်းစီကို တချို့တစ်ဝက်ပေးသွားမယ် လို့ ပြောတယ်။ ဒါပေမဲ့ မင်းတို့လစာငွေတွေ ကတော့ ငါတာဝန်မယူနိုင်ဘူးလို့ အဲဒီမန် နေဂျင်း ဒါရိုက်တာကပြောတယ်။ လစာငွေ မပြောနဲ့ဦး ကျွန်တော့်တို့အနေနဲ့ ကုန်ကျခဲ့တဲ့ ၀န်ဆောင်ခတောင် တချို့တစ်ဝက်ပဲ ပြန်ရ သေးတယ်''ဟု ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူက ထပ်မံပြောသည်။
ယင်းသင်္ဘောအေးဂျင့်သည် စီဒီစီ တရားဝင်ရရှိထားသော သင်္ဘောသားငါးဦး နှင့် အခြားသင်္ဘောသားရှစ်ဦးကို လှည့်ဖြား အကွက်ဆင်ပြီး ဆီတင်တန်ကာဖျက်သင်္ဘော ကို တင်ပေးခဲ့သောကြောင့် ယင်းသင်္ဘော သား ၁၃ဦးမှာ ဖျက်သင်္ဘောပေါ်တွင် သုံးလ ကြာ ဒုက္ခမျိုးစုံခံစားခဲ့ရပြီး မေ ၂၃ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နအဖစစ်အာဏာရှင်လူသတ်သမားဦးသန်းရွှေ ၏အိန္ဒိယ ခရီးအား ရုပ်သံမြင်ကွင်းနှင့်သတင်း
နအဖအာဏာရှင်လူသတ်သမားဦးသန်းရွှေနဲ့ ဒေါ်မ ကြိုင်ကြိုင်ခမြာ မကောင်းဆိုးရွားကောင်ကို ပရိတ်ရေထိသလို နာနာဘာဝကို လက်ဝါးကပ်တိုင်နဲ့ကပ်လိုက်သလို ဖြစ်သွားတာမို့ဒီလက်ဆောင်ကို လက်နဲ့ ယူပြီး လက်ခံလိုက်မိတဲ့အချိန်မှာ မူလရုပ်အသွင်တွေ ပေါ်ထွက်လာကာ ယုတ်မာကောက်ကျစ်ရိုင်းစိုင်းသောမျက်နှာအသွင်အပြင် ပေါ်ထွက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီး အကြမ်းမဘက် ငြိမ်းချမ်းရေးဗိသုကာကြီး မဟတ္တမဂန္ဒီရဲ့ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ “"Seven Social Sins" လူ့ လောကအတွက် အကျိုးမရစေသော ပြစ်မှု ၇ ရပ် - ဆိုတဲ့ စာသား (၇) ခုက အောက်ဖေါ်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, July 28, 2010 Links to this post
မြန်မာပြည်သူ့တွေရဲ့မေတ္တာကိုအပြည့်အဝခံယူနေရသောနအဖစစ်အာဏာရှင် ဦးသန်းရွှေ၏ အိန္ဒိယခရီးစဉ်တတိယနေ့ မြင်ကွင်း
ပေးပို့ ပေးသော ဆရာတော် ဦးထာဝရ အားကျေးဇူး တင်ပါသည်။
ချင်းတွင်းမြစ်ကို အမှီသဟဲပြု၍ ဝမ်းစာရှာကြရသူတို့၏ ဘဝရုပ်ပုံလွှာ
ဒီလို မိုးလရာသီမှာ ဆိုရင် ချင်းတွင်းဟာ ခပ်ကြမ်းကြမ်း၊ ခပ်ရမ်းရမ်း ဖြစ်လာခဲ့ပြီ။ လှိုင်းတွေထန်၊ လေတွေထန်၊ ရေတွေကပါ အဆမတန် ဒေါသကြီးနဲ့ ရမ်းကားပြင်းထန်လို့။ ချင်းတွင်းရဲ့ သဘောသကာယ ကောင်းမွန်ချိုမြတဲ့ အခွင့်အရေးကို အမိအရ အသုံးချပြီးတော့ ဝမ်းစာမဟုတ်တဲ့ မီးလျံနာလုပ်ဖို့ စိတ်ကူးရကြသူတွေ ကတော့ ဒီဇင်ဘာလ ရောက်ရင်ပဲ ချင်းတွင်း ရင်ခွင်ကို အတင်းအဓမ္မ ဖြဲခွဲလို့ သားစဉ်မြေးဆက် လက်မထောင်နိုင်မည့် အလုပ်ကြီး အကိုင်ကြီးတွေကို စွန့်လွှတ်စွန့်စား ရွက်လွှင့်ခဲ့ကြတယ်။
အဲဒီလို ဆောင်းလရာသီ ရောက်ရင် အပြင်းအထန် ဒေါသမာန်တွေ ဆောင့်တက်လေ့ရှိတဲ့ ချင်းတွင်းဟာ လူကြမ်းလေး မဟုတ်တော့ပေဘူး။ ယောဂီလိုတောမှီတဲ့ ခန္တီစရိုက်ကို အလိုက်အထိုက် ပွေ့ ပိုက်ရင်းနဲ့ မာန်မရှိတော့ဘူး။ ဒေါသဆိုတာ မသိတော့ပေဘူးလေ။ ဒီလိုအချိန်အခါ ရောက်လာတော့မှပဲ လောဘဇောတွေ ပိတ်ဆည်း လက်ကိုင်ပြုနေကြတဲ့ ဖြတ်လမ်းလိုက်ကြတဲ့ သူတွေက ချင်းတွင်းရဲ့ အသည်းကလီဇာတွေကို မညှာမတာ ထုတ်ယူကြရင်း လက်မထောင်ပြဖို့ ကြိုးစားကြတယ်လေ။
ချင်းတွင်းမြစ်ပြင်ပေါ်က သယံဇာတတွေကို ကလေးဝမြို့နယ်ထဲက မစိန်မှော်ကနေ လက်တစ်ဆုံး နှိုက်ထုတ်ခဲ့ကြပြီးပြီ။ မြစ်ပြင်ပေါ်မှာ မော်တော်တွေ ခေါင်းချင်းဆိုင်လို့ တစ်ဖုံရနိုင်သမျှ တူးဆွဖွေရှာခဲ့ကြတာ နှစ်တွေတောင်မှ အိုမင်းရင့်ရော်ခဲ့ရပေါ့။ ချင်းတွင်း ရေကို သောက်မျိုရင်းနဲ့ပဲ တစ်ခြုံကွယ်တစ်မယ် မေ့ခဲ့ကြတဲ့ ရွှေလောပန်း ဝိသမကောင်တွေက အခုဆိုရင် ချင်းတွင်းရဲ့ အလှည့်အပြောင်းကို ကျီဆယ်သလို ကလူဤသို့ မြူ၏သို့နှယ် အရှက်ကျောပြတ်သလို မျက်နှာများခဲ့ကြပြန်ပြီ။
မစိန်မှော်မှာ အခြေအနေ မဟန်တော့တဲ့နောက် ရွှေမာယာသည်ပီပီ အခုတော့လည်း တံငါမှော်တဲ့။ ဖြစ်သွားရတာ ကို ပြောချင်တာပါ။ အဲ့ဒီ တံငါမှော်ဆို တာက ဖောင်းပြင်မြို့နယ်ထဲမှာ ရှိတာကလား။ ကလေးဝမြို့နယ်ရဲ့ အောက်ဘက်ကျောမှာလေ။ ရိုက်ချက်တွေ ပြောင်းပြန်စီးဆင်းခဲ့ခြင်းနဲ့ အတူ အရောင်ပြောင်းလဲ တတ်ကြတဲ့ ရွှေလောပန်းတွေ . . .ရွှေကျင်သားတွေကလည်း မစိန်မှော်ကို ပစ်ခွာရင်း တံငါမှော်ကိုပဲ တစွဲစွဲတသဲသဲနဲ့ အပြောင်းအလဲ မြန်တတ်ကြ ပလေတယ်။
မင်းကင်းမြို့၊ မော်လိုက်မြို့၊ ကလေးဝမြို့၊ ဖောင်းပြင်မြို့၊ ဟုမ္မလင်းမြို့နဲ့ခန္တီးမြို့ တွေဟာ ရွှေမှာ အထင်ကရမြို့တွေ မဟုတ်လား။ ခန္တီးဆိုရင် ရွှေတစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘူး။ ကျောက်စိမ်းပါထွက်တာ။ ဖားကန့်ဘက်က ကျောက်စိမ်းဆိုတာနဲ့ နင်လားငါလားပဲ။ ဒါတွေက ချင်းတွင်းရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ဒေသအလှတွေပဲပေါ့။ ချင်းတွင်းကပေးတဲ့ မက်မော လောက်စရာ အရည်အသွေးတွေဟာ ဘဝတစ်ခုသာမကဘူး။ ဘဝတွေသောင်းနဲ့ချီ၊ သိန်းနဲ့ချီပြီးတော့ ကျိကျိတက် အရောင်ထွက်သူတွေ ဖြစ်သွားကြရပြီးပြီ။ ဒါတွေဟာ ပုံပြင် မဟုတ်ဘူး။
လက်တွေ့ သာဓကတွေလေ။ အဲသလို ပြောင်မြောက်တဲ့ဘဝအရည်အသွေး တွေပိုင်ဆိုင်သွားနှင့် ကြတဲ့လူတွေကို နှလုံးမူပြီး တော့အခုဆိုရင် ချင်းတွင်းရဲ့မျက်နှာသာ ပေးမှု တွေမျှော်လင့်နေကြသူတွေ အဆမတန်ပဲပေါ့။ မုံရွာကို ဖြတ်သန်းပြီးတော့မှ ချင်းတွင်းဆီကို ခိုမှီနေကြတာအရေအတွက်မနည်းမနော ရှိခဲ့ ပြီ။ ချင်းတွင်းကိုချစ်သလိုလို တွယ်ငင်ရစ်ပတ် သလိုလိုနဲ့ မူနွဲ့ဟန်ပိုနေကြပြီလေ။
ဒီလိုဒီလို လူတွေကို အကြောင်းရင်းခံပြုပြီးတော့ ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းက ရွာကလေးတွေဟာ ရိုးသားစွာပဲ တစ်ဝမ်းတစ်ခါးအတွက် ဝမ်းရေးကိုဖွေရှာ ဖြည့်တင်းနေကြရပြီ။ ဒါဟာသမ္မာအာဇီဝစစ်စစ်ပေပဲလေ။ မြစ်ဆိပ်ကိုသင်္ဘောနဲ့ အမြန် မော်တော်တွေ၊ သင်္ဘောငယ်လေးတွေ၊ ရှပ်ပြေး မော်တော်တွေ ဆိုက်ကပ်လာကြတဲ့ အချိန် ဈေးသည်တွေဟာ အပြေးအလွှား ရောင်းကြ၊ ချကြနဲ့ ဘဝဟာ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားပါပဲ။ သက်စွန့်ဆံဖျား ရောင်းချ စားသောက်ကြရတဲ့ ခြေလှမ်းတွေထဲမှာ အမှန်တရားကို လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ပြုရင်းနဲ့ အသက်တွေကို မြစ်ရေထဲ ဝကွပ်အပ်နှံရင်း ရှင်သန်မှုတွေကို ပုံအောပြီး လောင်းကြေးထပ်ခဲ့ကြရသလိုလေ။ ဈေးသည်တွေ ပလူပျံနေတဲ့အထဲ ကိုယ့်ဈေးဗန်းထဲက လက်လွှတ်နိုင်ဖို့ရာ အချိန် တိုတိုကာလမှာပဲ အဲဒီသင်္ဘောတွေ၊ မော်တော်တွေ ဆိပ်ကမ်းက ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရင်တော့ ရောင်းလက်စတန်းလန်းနဲ့ပဲ နက်ရှိုင်းကျယ်ပြောတဲ့မြစ်ရေထဲကနေ ကမ်းဆီသို့ အသက်ကိုလုပြီး ကူးခပ်ကြရတဲ့ ဘဝတွေ နဲ့ လူတွေရဲ့ ကူးခတ်ရမှုတွေ။
အိမ်မှာစောင့် မျှော်နေကြတဲ့ဘဝဖော်တွေ မအိုမီ၊ မနာမီ၊ မသေမီ ဝမ်းရေးစိုပြည်နိုင်ဖို့ ကံကြမ္မာနဲ့ အလဲအထပ်လုပ်ပြီးတော့မှ ဟော့ဒီဈေးသည်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို ခုံခုံမင်မင် ထွေးပိုက်ခဲ့ ရတာပဲဟာ။ အလျှင်အမြန်ကူးခပ်ပြီးပြေးလွှားနိုင်ပါမှ နောက်တစ်နေ့ဆိုတာ မျှော်လင့်နိုင်မှာမဟုတ်လား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါတို့ဟာ မာယာ မကြွယ်ပရိယာယ်ထည်လဲမသုံးတဲ့ အညာမြေက အရိုးအစင်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ ချင်းတွင်းမြစ်ကြီးအသိဆုံးပဲပေါ့။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, July 27, 2010 Links to this post
အသွားမတော်တစ်လှမ်းကြောင့် အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ သူနာပြုဆရာမ
ရန်ကုန်မြို့၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ လှည်းတန်း လမ်းမပေါ်တွင် ဇူလိုင် (၁၆) ရက်နေ့က အသက်(၃ဝ)အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပေါ့ဆစွာ လမ်းဖြတ်ကူးမှုကြောင့် ယာဉ်တိုက်ခံရပြီး သေဆုံးသွားကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်ပွားပုံမှာ ဇူလိုင် (၁၆)ရက်နေ့ နံနက် (၉းဝ၅)အချိန်တွင် ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန် လမ်းအတိုင်း မြောက်မှတောင်သို့ ယာဉ်မောင်း ကျော်သူရနိုင် မောင်းနှင်လာသည့် တက္ကစီ အငှားယာဉ်သည် လှည်းတန်းမှတ်တိုင် ''ဂျီရော်ဒါနို'' ဆိုင်ရှေ့ အရောက်တွင် အနောက်မှ အရှေ့သို့ လမ်းဖြတ်ကူးလာသူ မစန်းစန်းဝေ (၃ဝ)နှစ်အား ဝင်ရောက် တိုက်မိကာ ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသွားကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
''အခင်းဖြစ်ချိန်က ယာဉ်ကြောရှုပ်ထွေးနေချိန်ပါ။ အဲဒီအမျိုးသမီးက (၂၄၃) အထူးယာဉ်ကြီးရှေ့ကနေဖြတ်ကူးတာပါ။ အသံကြားလိုက်ရတော့ အထူးယာဉ်က တိုက်တယ်ထင်တာ။ သွားကြည့်တော့ ဘေးကတက္ကစီအထွက်မှာ ဝင်တိုက်မိတဲ့ ပုံစံပဲ။ လဲကျသွားတဲ့အနေအထားက ပက်လက်ပုံစံဆိုတော့နောက်စေ့နဲ့ ကတ္တရာ လမ်းနဲ့ရိုက်မိသွားတယ်ထင်တယ်။ ပွဲချင်းပြီးပါပဲ။ ကားသမားကလည်း ထွက် မပြေးပါဘူး''ဟုမျက်မြင်တွေ့ရှိသူတစ်ဦးကပြောကြားသည်။ သေဆုံးသူ မစန်းစန်းဝေသည် အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်တွင်နေထိုင်သူ ဖြစ်သည်ဟုသိရသည်။ အခင်းဖြစ်ရပ်ကြောင့်ယာဉ်မောင်းကျော်သူရနိုင် (၄ဝ)နှစ် (ဘ)ဦးကိုကိုနိုင်ကိုယာဉ်မှုစစ်ရဲစခန်းမှ (ပ) ၃၈၂/၂ဝ၁ဝ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃ဝ၄(က) အရ အမှုဖွင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက် လျှက် ရှိကြောင်း
သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းမွေးနေ့နဲ့ ဗိုလ်ကြီးဝင်းထိန် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးသို့ ရောက်ရှိခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ
သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း အမှတ်တရ နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားကို ၂၀၁၀ ဇူလိုင် ၂၃ ရက်နေ့ နံနက် ၇ နာရီမှ နေ့လည် ၁၂ နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့ စမ်းချောင်းမြို့နယ် ကျွန်းတောလမ်းတွင် ကျင်းပခဲ့ရာ စာပေနဲ့ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးများ စုံညီစွာ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ ကျော် ကျခဲ့သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကိုယ်ရေးအရာရှိ ဗိုလ်ကြီးဝင်းထိန်စာ ၂၀၁၀ ဇူလိုင် တတိယပတ်က ရန်ကုန်မြို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးကို ရောက်ရှိပြီး ပါတီတာဝန် နိုင်ငံ့တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရာ ထောင်ဒဏ် ၁၉ နှစ် ကျခဲ့သူ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းတင်နဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဝင်များက ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
နအဖစစ်အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်ဦးသန်းရွှေနှင့်ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်တို့၏ အိန္ဒိယခရီးစဉ်အား မြန်မာပြည်သူလူထုများက ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ပြသနေပုံရုပ်သံမြင်ကွင်း
မြန်မာပြည်ကနအဖစစ်အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်၏ခရီးစဉ်မှာ ဗေဒင် ယတြာ ဟူးရားဆရာတို့၏ညွှန်ကြားချက်အရဒီလိုတွေဝတ်ရမယ်ဆိုလို့ နတ်ကတော်အသွင်တမျိုးဖြစ်နေကြတဲ့လင်မယား
သံဃာတော်တွေကိုသတ်သမားကျောင်းသားပြည်သူတွေကိုသတ်သမားကဂါယာဒေသရှိ မဟာဗောဓိ ပင်ကိုလက်အုပ်ချီရှင်ခိုးအုံးမယ်တဲ့
ဒီခရီးစဉ်မှာမူးမင်းမတရားကြီး သန်းရွှေနဲ့အတူ လိုက်ပါလာကြတဲ့ သူခိုးအကြီးပိုင်းထဲက ဦးသူရရွှေမန်းနဲ့ ကြင်ယာတော်၊ အတွင်းမှာရေးပြီးမူးတဲ့ အတွင်းရေးမှူး(၁) ၈လုံး သီဟသူရတင်အောင်မြင့်ဦး။ စစ်ရေးချုပ် သူရမြင့်အောင်၊ ငလိမ်ဝန်ကြီး ကျော်ဆန်း။ နိုင်ငံတကာပတ်ညာတဲ့ ဦးဥာဏ်ဝင်း၊ ဘုန်ကြီးသတ်တဲ့ သာသနာရေးဝံကြီးသူရမြင့်မောင်။စီမံကိန်းတွေရေးပေးပြီးစားနေတဲ့စိုးသာ၊ကုန်ရင်းသွယ်တဲ့ဝံကြီးတင်နိုင်သိန်း၊ ဆရာဝန်တွေပေါ်ခေါင်းပုံဖြတ်တဲ့ဒေါက်တိုကျော်မြင့်၊ဒုဝံကြီးရမ်းကုပိုင်စိုး၊နို့ဆီခွက်နဲ့ဆက်သွယ်ရတဲ့ဆက်သွယ်
သေခါနီးမှာ ရှောင်ရှားလို့ မရစကောင်းတဲ့ မရဏာသန္နဇော ကောင်းအောင် နေ့လားညလား ချိန်မရွေး ကြွေကြသွားနိုင်တဲ့ သန်းရွှေတို့ အုပ်စုဟာ ကုသိုလ်မှုတွေကို လာလုနေကြပါတယ်။ ယတြာအနေနဲ့ မဟာဗောဓိ ပညောင်ပင်ခြေရင်းမှာ ညောင်ပင်ငယ်တပင်လည်း စိုက်မယ်လို့ ကြားသိရပါသေးတယ်။ ရှေးဟောင်း သုတေသနနဲ့ စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ အသစ်စားထိုးတာတွေကို ဥပဒေအရ တားမြစ်ထားတာ ကြာပါပြီ။ ဒါကို အိန္ဒိယအစိုးရက ဗမာပြည်က သဘာဝဓာတ်ငွေ့လိုချင်တာနဲ့ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ပြီး လက်ခံနေတာကိုလည်း မဟာဗောဓိခြေရင်းမှာ သန်းရွှေပေးထားတဲ့ ကြေးဆင်းတုကို မြင်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။
လုံးခြုံရေးတာဝန်ယူထားတဲ့အိန္ဒိယသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသန်းရွှေအတွက်တာဝန်ယူပေးနေရတာကို စိတ်ပျက်ညဉ်းညူနေကြကြောင်းသိရပါတယ်။တဆက်တည်းမှာနယူးဒေလီကိုသွားပြီးသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီးအိုင်တီမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဟိုဒရာဘတ်မြို့ကိုသွားရောက်လေ့လာမည်ဖြစ်ကြောင်းမကောင်းသတင်းကို စိတ်နာနာဖြင့် ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူတွေကိုမြောက်များစွာသတ်ဖြတ်ခဲ့သောလူသတ်သမားကြီးနအဖစစ်အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင် ဦးသန်းရွှေ၏ နောက်ဆုံးနေဝင်ချိန်
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, July 26, 2010 Links to this post
မြန်မာပြည်သူ့တွေရဲ့မေတ္တာကိုအပြည့်အဝခံယူနေရသောနအဖစစ်အာဏာရှင် ဦးသန်းရွှေ၏ အိန္ဒိယခရီးစဉ်ဒုတိယနေ့ မြင်ကွင်း
ပြည်တွင်းပုံနှိပ်လုပ်ငန်း ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ပြည...
ပြည်သူ့အနုပညာရှင် ကိုကျော်သူ၏ မြန်မာပြည်သူများအား...
စစ်အာဏာရှင်လူသတ်သမားဦးသန်းရွှေ ရဲ့ ခရီးစဉ် အိန္ဒိယ ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) ဟာ နိုင်ငံတကာ အ...
မြန်မာပြည်အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်ရှိ အကျင့်ပျက် ၀န်ထမ...
မြန်မာ့ကြယ်ငါးပွင့်သင်္ဘောလုပ်ငန်း ခရီးသည်နှင့် ကုန်...
ဧရာဝတီတိုင်း အမာမြို့နယ်၌ လေဆင်နှာမောင်း တိုက်ခတ်မ...
မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအီးလ် အ...
ဗိုလ်ကြီးဝင်းထိန်နှင့် အင်တာဗျူး (ရုပ်သံမြင်ကွင်း)...
နအဖ စစ်အာဏာရှင် လူသတ်သမားများ၏ ပထွေး မြောက်ကိုရီးယ...
လူသတ်သမားစစ်အာဏာရှင်ဦးသန်းရွှေတို့ရဲ့ ၅ ရက်ကြာ အိန...
နအဖစစ်အာဏာရှင်လူသတ်သမားဦးသန်းရွှေ ၏အိန္ဒိယ ခရီးအား ...
ချင်းတွင်းမြစ်ကို အမှီသဟဲပြု၍ ဝမ်းစာရှာကြရသူတို့၏ ...
အသွားမတော်တစ်လှမ်းကြောင့် အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ သူနာပြုဆရ...
သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းမွေးနေ့နဲ့ ဗိုလ်ကြီးဝင်းထိန် အ...
စစ်အစိုးရ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကုို ဒေါက်တာနေ၀င်...
တိုနှံ့နှံ့စကတ်၊ နှုတ်ခမ်းနီရဲရဲ ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပ...